Vaovao songadina Archives - Page 2 sur 3 -
Jirama : HO FOANA TANTERAKA NY DELESTAZY
Afaka ny adin-tsain’ny mponina. Nanamafy tamin’ny alalan’ny fanambarana ny orinasa Jirama fa ho foana tanteraka ny delestazy. Voalaza tamin’izany fa hiampy 10 MW ny tanjaky ny famatsiana herinaratra any amin’ny faran’ny volana Febroary ary mbola …Tohiny
Omaly maraina no nivoaka ny didim-pitsarana izay niampangana ny Senatera Lylyson Roland momba ny raharaha fiantsoana tanàna maty tamin’ny taona lasa. Voasazy herintaona sazy mihatra i senatera araka ny didy navoakan’ny fitsarana. Isan’ny nihampangana azy …Tohiny
Horonan-tsarimihetsika, izay no azo ilazana ny fizotry ny fisamborana ny sambo “Lumina” nitondrana ireo andramena miisa 341 nokasaina haondrana an-tsokosoko. Nanomboka tany Iavoloha ny fanomanana ity hetsika ity araka ny baikon’ny filoha Hery Rajaonarimampianina araka …Tohiny